Wararka – Radio
Maalin wanaagsan akhristayaal waxaan halkan idinku so gudbinaynaa dhaqdhaqaaga ganacsi ee ascaarta iyo sarifka suuqyada mgaalada Gaalkacyo. Sirifka lacagta, qiimaha ascaarta iyo dhamaan qiimaha la kala siisto quutul daruuriga maalinlaha ah. Wariye Ibraahim Jeekey ayaa noo eegaya. Codka Nabadda...
Madaxweyne Trump ayaa shaaciyay hindiseyaal cusub oo ku saabsan gidaarkii uu doonayay in uu ku kala xiro xudduudaha waddamada Mareykanka iyo Mexico. Hindesiyaashani cusub ayuu uga gol-leeyahay sidii loo soo afjari lahaa hakadka ku yimid hawlaha qaar ee dowladda Mareykanka...
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo uu wehliyo Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa Kulan gaar ah la qaatey guddi ka socda Golaha Odayaasha dhaqanka ee koonfur Galbeed Kulanka waxaa looga hadlay sidii loo wajihi lahaa...
Taliska ciidamada Maraykanka ee loosoo gaabiyo Africom ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in 52 xubnood oo ka tirsan ururka Alshabaab ay ku dileen duqayn ay ka gaysteen gobolka jubada hoose ee Soomaaliya. Africom waxay waraaxafdeedkooda ku...
January 9, 2019	151	Like
Banaanbax balaaran oo ay soo abaabuleen dadka deegaanka Garacad ee degmada Jariiban ayaa maanta lagu taageeray madaxweynaha cusub ee Puntland Saciid Deni. Banaanbaxa ayaa intii uu socday waxaa madaxdii mataleysay shacabka degmada Jariiban ee meesha ka hadashay ay weydiisteen madaxweynaha...
January 7, 2019	237	Like
Xarunta barlamaanka Puntland ee magaalada Garoowe ayaa waxaa ka socda dhegaysiga khudbadaha musharixiinta u tartamaya xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ee doorasahda berri dhacaysa. TOOS
January 6, 2019	725	Like
Garoowe (Codka Nabadda) Waxaa si rasmi ah Hoolka Baarlamaanka Puntland uga bilaabantay diiwaan gelinta musharaxiinta loolanka adag ugu jira qabashada xilka madaxtinimada Puntland, waxaana musharaxiinta qaarkood ay haatan bilaabeen in ay iska diiwaan geliyaan gudida doorashada madaxtinimada Puntland. Shuruudaha ku...
January 6, 2019	472	Like
Garoowe (Codka Nabadda) Xarunta golaha shacabka Puntland ee magaalada Garoowe ayaa waxaa ka socota qabashada araajida musharixiinta u taagan xilalka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. Gudiga doorashad madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland ayaa durba bixiyey shahaadada musharaxnimada waxaana...
January 6, 2019	518	Like
Boosaaso (Codka Nabadda) Illaa Lix Musharax oo ka mid ahaa Musharaxiinta u taagnaa xilka Madaxweynaha Puntland ayaa xalay ku dhawaaqay inay tanaasuleen, kaddib shir jaraa’id ay ku qabteen magaalada Garowe. Musharaxiintan ayaa sheegay inay u tanaasuleen markii ay arkeen duruufaha...
January 6, 2019	487	Like
Muqdisho (Codka Nabadda) Warar hoose oo ay heshay wakaaladda wararka ee Codka Nabadda ayaa sheegaya in Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya uu wad atashiyadii ugu dambeeyay ka sameynayo Isku shaandheyn uu Wasiiro cusub ugu soo darayo Xukuumadda halka qaar kalena Xilal...
December 29, 2018	110	1